कर्मचारी अभावले सेवाग्राहीलाई सास्ती, जनप्रतिनिधि नै कर्मचारीको काममा – इन्सेक
कर्मचारी अभावले सेवाग्राहीलाई सास्ती, जनप्रतिनिधि नै कर्मचारीको काममा
बैतडी ०७६ असोज २५ गते
स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभावका कारण कारण आफूहरूले सास्ती खेप्नु परेको स्थानीय सेवाग्राहीले गुनासो गरेका छन् ।
पञ्चेश्वर गाउँपालिका–२ का वडा अध्यक्ष दशरथसिह मङ्गोला जनप्रतिनिधि हुन् । तर, उनको भूमिका त्यतिमा मात्रै सीमित छैन ।
वडा कार्यालयमा कर्मचारी अभावका कारण उनी वडा कार्यालयमा बसेर कर्मचारीको समेत काम गर्दै आइरहेका छन् ।
वडासचिव नहुँदा कर्मचारीको काम गर्दै आएको भएपनि कागज–पत्रमा कर्मचारीकै हस्ताक्षर हुनुपर्ने भएकाले उनलाई समस्या हुने गरेको छ ।
‘जनप्रतिनिधि चुनिएको तीन वर्ष पुग्न लाग्यो । अझै कर्मचारी छैनन् ।’–उनले भने । कार्यालयमा पुगेपछि कार्यालय सहयोगीको काम समेत गर्नु परेको उनको भनाई छ ।
नागरिकता सिफारिस, जन्मदर्ता, बसाईसराई, विवाह दर्तालगायतका कागजात सचिवले लेखेपछि हस्ताक्षर मात्रै गर्नुपर्नेमा आफूले नै सचिवको काम समेत गर्नु परेको उनले सुनाए ।
मेलौली नगरपालिका–१ का वडाध्यक्ष सुरत नेगी पनि वडा कार्यालयमा बसेर कर्मचारीको समेत काम गर्दै आएका छन् ।
कर्मचारी नहुँदा सबै काम आफुले नै गर्नुपरेको उनि सुनाउछन् । पालो मिलाएर अरू वडाका सचिवलाई काम लगाउनु परेको उनले बताए ।
‘एकजना सचिवले दुई भन्दा बढी वडाको काम गर्नु परेको छ ।’–उनले भने–‘वडामा योजनाको काम हुन्छ । पञ्जिकरणको काम हुन्छ । सबैमा सचिवकै हस्ताक्षर चाहिन्छ । सचिव नहुँदा समस्या भइरहेको छ ।’
मेलौलीका स्थानीय केशवसिंह भाटले भने–‘नगरपालिकामा गए कर्मचारी भेटिँदैनन् । सङ्घीयताको मर्मअनुसार जनताले सहज सुविधा पाउन सकेका छैनन् । यसमा सरकारको ध्यान गएको देखिँदैन ।’
सचिव नहुँदा वडा कार्यालयले दिने सेवा पाउनै मुस्किल भएको मेलौली नपा–१ का लक्ष्मण पार्कीले दुखेसो पोखे ।
उनले भने–‘वडामा जनप्रतिनिधि आएको दुई वर्ष भइसकेको छ । तर, कर्मचारी छैनन् । आएका पनि महिना दिनमै सरूवा भएर जान्छन् ।’
पुर्चौडी नगरपालिकामा झनै ठुलो समस्या छ । यहाँका कुनै पनि वडामा सचिव छैनन् । नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पृथ्वीराज अवस्थीले सचिव नहुँदा निकै समस्या भएको बताए ।
‘कर्मचारी समायोजनपछि झन् समस्या भएको छ । सचिव नहुँदा सेवाग्राहीले नगरपालिका धाउनुपर्ने बाध्यता छ ।’–उनले भने–‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा आएको भनिएको छ । तर, नागरिकले त्यसको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् ।’
१० ओटा वडा रहेको पुर्चौडी नगरपालिकामा एउटा पनि वडामा सचिव नभएका कारण स्थानीय सेवाग्राहीले सास्ती भोग्नु परेको प्रशासकीय अधिकृत अवस्थीले बताए । नगरपालिकामा कर्मचारीको माग गरेको धेरै भइसक्दा समेत अहिलेसम्म कर्मचारी नआएको उनको भनाई छ ।
पुर्चौडी नगरपालिका–५ का वासुदेव भट्टले पनि कर्मचारीहरू नभेटिदाँ कामहरू समयमै गर्न नपाइएको दुखेसो पोखे ।
उनले भने–‘नगरपालिकामा कर्मचारीहरू नै कम छन् । कसरी हामीले सेवा पाउछौँ त ? कहिले को हुँदैनन्, कहिले को ? घण्टौँ कुर्दा पनि काम नभएर फर्कनु परिरहेको छ ।’
सिगास गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रघुनाथ अवस्थी सचिव नहुँदा निकै समस्या भएको बताउँछन् ।
‘कर्मचारी समायोजनपछि झन् समस्या भएको छ । सरूवा भएर गए तर नयाँ आएनन् ।’–उनले भने–‘नागरिकले हामीसँग गुनासो गर्छन् ।’
दोगडाकेदार गाउँपालिकामा पनि सचिव छैनन् । आठ ओटा वडा रहेको दोगडाकेदारमा एक जना मात्रै सचिव छन् ।
जसका कारण सामाजिक सुरक्षा भत्ता समेत वितरण गर्न नसकिएको गाउँपालिका अध्यक्ष चक्र कार्कीले बताए । उनले भने–‘कति पटक माग गर्ने ? माग गरेका गरेकै छौँ । तर, कर्मचारी पठाउँदैनन् ।’
६ ओटा वडा भएको शिवनाथ गाउँपालिका पनि सचिवविहीन रहेको छ । प्राविधिक सहायकको भरमा वडा चलाइरहेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धुर्ब दयालले बताए ।
कृषि र भेटेनरी बाहेक अन्य शाखाका कर्मचारीहरू नभएको बताउँदै उनले भने–‘मेलौली नगरपालिकाका लेखापाललाई अनुरोध गरेर कर्मचारीको तलब खुवाएका छौँ ।’
कर्मचारी अभावका कारण स्थानीय नागरिकको गुनासो सुन्नुपर्ने बाध्यता रहेको शिवनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष कर्र्णसिंह साउदले बताए ।
पाटन नगरपालिकाकाका वडाहरूमा पनि सचिव छैनन् । १० ओटा वडा भएको नगरपालिकाका चार वडा सचिवविहीन रहेका छन् । नगरपालिकाको कृषि शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरू पनि छैनन् ।
सरदमुकाममै ११ ओटा वडा रहेको दशरथचन्द नगरपालिकामा पनि चार वडा सचिवविहीन रहेका छन् । जसका कारण स्थानीयहरूले छिटोछरितो रूपमा सेवा पाउन नसकेको गुनसो गरेका छन् ।
जिल्लाका ८४ मध्ये ४२ वडामा सचिव नभएको स्थानीय तहको तथ्याङ्कले देखाएको छ । कर्मचारीको मात्र होइन स्थानीय तहमा कार्यालय सञ्चालनको समस्या समेत रहेको छ ।
मेलौली नगरपालिका–३ को आफ्नो कार्यालय नभएका कारण वडा नम्बर २ को कार्यालयबाट दैनिक काम गर्नु परिरहेको वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष रघुवीर भाटले बताए ।
डिभिजन वन अधिकृत केशव पराजुलीले गाउँ तथा नगरपालिकामा मात्रै होइन जिल्लाका अन्य सरकारी कार्यालयहरूमा पनि कर्मचारीको अभाव भएको बताउँदै कार्यालयमा आएका कर्मचारीसमेत १५ दिन नबित्दै सरूवा हुने गरेको बताए ।
४० वर्षीया महिलालाई बलात्कार गरेको आरोपमा पीडित पक्षले अर्खला स्वास्थ्य चौकी बुलिङ्गटार गाउँपालिका–४ उपल्लो अर्खलाका प्रमुख ४२ वर्षीय टोकबहादुर सुस्लिङ्ग मगरविरूद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) मा…
०७६ माघ ४ गते	नवलपरासी(सुस्ता पूर्व)
बिना पुर्जी गिरफ्तार गरि यातना दिएको पीडितको आरोप
क्षिरेश्वरनाथ नपा–५ बस्ने ३९ वर्षीय मंगल राम चमारले आफूलाई पुस २६ गते साँझ ईलाका प्रहरी कार्यालय महेन्द्रनगरका असइको नेतृत्वमा रहेको पाँच जना प्रहरीको टोलीले गिरफ्तार गरि प्रहरी कार्यालयमा लगी यातना…
०७६ माघ ४ गते	धनुषा
१४ वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा धनगढीमाई नपा–११ का १९ वर्षीय विनोद रामलाई ईलाका प्रहरी कार्यालय लहानले माघ २ गते गिरफ्तार गरेको छ । बालिकालाई माघ २ गते आरोपित रामले…
०७६ माघ ४ गते	सिरहा
२१ वर्षीया किशोरीलाई पुस २९ गते सामूहिक बलात्कार गरेको आरोपमा प्रहरीले जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–२० का १८ वर्षीय नैमुदिन अंसारी, २५ वर्षीय शेष जमिन आलम र १९ वर्षीय शेष समी अख्तरलाई…
०७६ माघ ४ गते	बारा
प्रतिबन्धित नेकपाका कार्यकर्ता अदालत परिसरबाट पुनः गिरफ्तार
नेत्रबिक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी निकट दलित मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष ३३ वर्षीय सुरज परियार र पार्टी सदस्य कपिलवस्तु जिल्ला बाणगङ्गा नपा–८ का ३२ वर्षीय विष्णुबहादुर रावतलाई प्रहरीले…
०७६ माघ ४ गते दाङ
मानव अधिकार शिक्षा रेडियो कार्यक्रम (२०७६ पुस २७ गते)